မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက် Android အတွက် APK ကိုဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း & မိုးလေဝသ Apps ကပ » မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက် APK ကို
မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက် အကောင်းဆုံးကိုရာသီဥတု app ကိုအများဆုံးတိကျမှန်ကန်နေ့စဉ်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များကိုအခမဲ့နှင့်အလုပ်ချိန်နာရီရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်, ပြင်းထန်သောရာသီဥတုသတိပေးချက်များ, နေ့စဉ်မိုးလေဝသနောက်ဆုံးသတင်းများ, မုန်တိုင်းခန့်မှန်းချက်, ရာသီဥတု Widgets တွေ, ရာသီဥတုရေဒါများနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရာသီဥတုများထဲမှ! 🛰🚀🌪
ဒေသခံရာသီဥတုကို real-time အပူချိန်, မုန်တိုင်း, မိုးရေချိန်, ဆီးနှင်း, စိုထိုင်းဆ, ဖိအား, လေတိုက်အင်အားနှင့်လေဦးတည်ချက်ခန့်မှန်းဒီရာသီဥတု app ထဲမှာအားလုံးများမှာ! ☀️🌤⛅️
မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်အလိုအလျှောက်သင့်ရဲ့လက်ရှိတည်နေရာအတွက်ရာသီဥတုကို detect ။ ရာသီဥတုအခြေအနေလေထုဖိအား, ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆ, မြင်သာအကွာအဝေး, ကွဲပြားခြားနားသောယူနစ်အတွက်မိုးရွာသွန်းမှု, နှင်းအမှတ်, လေတိုက်နှုန်းနှင့်ဦးတည်ချက်, ဆယ်ရက်အနာဂတ်ခန့်မှန်းချက်အပြင်ကိုလည်းအလုပ်ချိန်နာရီရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်ပါဝင်သောရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်များတွင်အများအပြားသတင်းအချက်အလက်ရှိပါတယ်! 💧💦☔️
🌦 မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက် features တွေ
- ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာများအတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်, အားလုံးနေ့စဉ်, အပတ်စဉ်, Real-time နှင့်အတူအလုပ်ချိန်နာရီ update ကိုအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်
- နေ့စဉ်ကမ်းလှမ်းချက်ဒီနေ့ရဲ့ရာသီဥတု, မနက်ဖြန်ရဲ့ရာသီဥတု, 10 ရက်ပေါင်းရာသီဥတုနှင့် 24 တစ်ခုချင်းစီကိုနာရီအတွက်
- မျိုးစုံတည်နေရာအတွက်ရာသီဥတုအခြေအနေများ Add နှင့်ခြေရာခံ
- အချို့သောဒေသများတွင်ရရှိနိုင် pm တွင် 2.5 ဒေတာ
- ဂြိုဟ်တုပုံရိပ် & မိုးလေဝသရေဒါ
- မိုးရေချိန်၏နောက်တစ်နေ့ 10 ရက်ပေါင်း
- ရီးရဲလ်အချိန် update ကို widget က
- ပြင်းထန်သောရာသီဥတုသတိပေးချက် & မုန်တိုင်းခန့်မှန်းချက်
- သင်ကအသိပေးချက်များကိုခွင့်ပြုပါနှင့် disable နိုင်ပါတယ်
- မိုးလေဝသဝစ်ဂျက်များနှင့်ဖြစ်ပွားနေသောအကြောင်းကြားစာ, မျိုးစုံတည်နေရာ widget ကပေါ်
- အမျိုးမျိုးသောရာသီဥတုသတင်းအချက်အလက်: အပူချိန်, လေတိုက်, စိုထိုင်းဆ, နှင်းအမှတ်, မိုးရွာ, မြင်ကွင်း, ဖိအား, နေထွက်, နေဝင်ချိန်
- မိုးလေဝသသင့်လက်ရှိတည်နေရာ (ကွန်ယက်နှင့်ဂျီပီအက်စ်များကအလိုအလျောက်တည်နေရာထောက်လှမ်း) အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ရာသီဥတုအခြေအနေကိုပြန်လည်ရရှိရန်, ပထဝီ-positioning ကိုထောကျပံ့
- ပြောင်းလဲခြင်းယူနစ်ဆက်တင်: အပူချိန် (ကို C / F ကို), အချိန်ပုံစံ (12h / 24h), မိုးရွာနိုင် (မီလီမီတာ, လက်မ), လေတိုက်နှုန်း (km / h, မိုင် / ဇ, m / s), ဖိအား (mmHg, ဖားအံ, mbar )
ဤသည်ရာသီဥတု app ကိုလည်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရာသီဥတု tracker သို့လှည့်နိုင်ပါတယ်ကြောင့်သင်တို့သည်ဤမျှအပေါ်မုန်တိုင်းရာသီဥတု, အပူလှိုင်း, မိုးကြိုးပစ်, မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်းနှင့်တူသောလာမည့်ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲအဘို့ပြင်ဆင်ထားရကူညီဖို့ရန်သင့်အားပြင်းထန်ရာသီဥတုသတိပေးချက်များပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
အမေရိကန်, ဂျပန်, ကိုရီးယား, ကနေဒါ, ဘရာဇီး, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း, ဆွီဒင်, ဒိန်းမတ်, အီတလီ, ဂျာမဏီ, ပြင်သစ်, ပေါ်တူဂီ, စပိန်, အိန္ဒိယ, အင်ဒိုနီးရှား, မက္ကစီကို, ဖင်လန်, နော်ဝေး, ရုရှား, တရုတ်, သြစတြေးလျ, ဗီယက်နမ် ...
ဝါရှင်တန်, နယူးယောက်, ကယ်လီဖိုးနီးယားဆန်ဖရန်စစ္စကို, တက္ကဆက်ပြည်နယ်, ဂျော်ဂျီယာ, ဖလော်ရီဒါ, Ottawa, ဟာဝိုင်ယီ, တိုရွန်တို, Dallas မြို့, Nashville, Kansas City, လန်ဒန်, ရောမမြို့, မက်ဒရစ်, အော်စလို, ပဲရစ်, နန်စီ, Dijon, Brest, Marseille, Rennes, Reims , Chamonix, လိုင်ယွန်, Metz, Grenoble, Strasbourg ဘာလင်, တိုကျို, စင်္ကာပူ, ဟောင်ကောင်, ဟနွိုင်း, အိုဆာကာ, ဆိုးလ် ...
ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်လူတိုင်းနှင့်အတူအလွန်အသုံးဝင်သည်။ သငျသညျရာသီဥတုသတင်းအချက်အလက်သိလျှင်, သင့်အစီအစဉ်ကိုဂရုတစိုက်ကိုပွငျဆငျနိုငျသညျ, သငျသညျ☃️အလုပ်မှာ sucessful ဖြစ်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်life.❄️ရပါလိမ့်မယ်⛄️
ပေါ်လာကြ, အရှိဆုံးတိကျမှန်ကန်အခမဲ့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက် app ကို, ရာသီဥတု app ကိုသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာသီဥတုဘူတာရုံဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် Download!
🌈 Optimized တည်နေရာ
💯 Fixed အသုံးပြုသူတုံ့ပြန်ချက် bug တွေ
9.08 ကို MB
BMI Calculator ကို
မေးခွန်းများနေ့စဉ်မှတ်တမ်း - မိမိကိုယ်ကိုထင်ဟပ်စေသောမေးခွန်းတစ်ခု။
5k & 10k မှ Couch
Android ™ 10 launcher UI အတွက် Cool Q Launcher၊ အခင်းအကျင်း